Ity ny antony tokony hampidiranao ny paikadin'ny mailaka sy haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Somary feisty izahay rehefa nisy nizara a mailaka mifampitaha amin'ny sary amin'ny haino aman-jery sosialy. Ny antony voalohany tsy nifanarahanay tamin'ny mifampitaha amin'ny ny fifanakalozan-kevitra dia ny tsy tokony hisian'ny resaka fisafidianana ny iray na ny iray hafa, tokony ho resaka fomba fampiasana tanteraka ny fampitaovana tsirairay avy.
Tokony hanontany tena ny mpivarotra hoe ahoana no mety mailaka barotra ary media marketing sosialy miasa raha toa ka nirindra ny ezaka. Ny olana dia izay 56% fotsiny ny mpivarotra dia mampifandray ny fiaraha-monina amin'ny programa marketing mailaka.
Ny fampiasana ny lisitry ny varotra mailakao hampitomboana ny fantsom-pifaneraserana- sy ny mifamadika- dia toe-javatra mandresy. Na izany aza, teny fampitandremana: ny mpivarotra dia tokony hitandrina mba hahatadidy ny tanjon'ny fantsona tsirairay. Na dia zava-dehibe aza ny fitazonana ny tanjon'ny fantsonao amin'ny tanjany manokana sy ny tanjon'izy ireo amin'ny fampiroboroboana fantsona mahomby, ny zava-misy dia ny fampiasana fantsona iray handrehitra ny fahombiazan'ny iray hafa dia tetikady marketing matotra. Amin'ny fampidirana ny mailakao sy ny paikadin'ny media sosialy, azonao atao ny mampitombo ny tratry ny marikao, manampy amin'ny fitarihanao ary mampihetsika azy ireo amin'ny fantsom-pivarotana.
Ny iray amin'ireo fikarohana lehibe izay niavaka taminay dia Maninona raha ampiana fizarana sosialy amin'ny mailakao?
Nanampy ny fampidirana Facebook 31 mizara isaky ny mailaka 100 no nosokafana.
Nanampy ny Twitter fampidirana 42 mizara isaky ny mailaka 100 no nosokafana.
Nanampy ny fampidirana LinkedIn 10.3 mizara isaky ny mailaka 100 no nosokafana.
Nanampy ny fampidirana Google+ 13 mizara isaky ny mailaka 100 no nosokafana.
Nanampy ny fampidirana Pinterest 14 mizara isaky ny mailaka 100 no nosokafana.
Aza hadino ny mamaky ny torolàlana farany avy amin'ny Reachmail, Tombony azo amin'ny fampidirana ny paikadin'ny mailaka sy ny haino aman-jery sosialy.
Tags: mailakamailaka sy facebookmailaka sy googlemailaka sy linkinmailaka sy pinterestmailaka sy media sosialymailaka sy twittermailaka Marketingmailaka vs media sosialyFacebookfacebook sy mailakagoogle sy mailakaGoogle +LinkedInlinkin sy mailakaPinterestpinterest ary mailakacontactmailhaino aman-jery sosialyhaino aman-jery sosialy mifanohitra amin'ny mailakahaino aman-jery sosialy vs mailakaTwittertwitter sy mailaka